UNWTO: Snow and Mountain Tourism faces the challenge of adapting to change | Meeting Industry News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeShishini lokuhlangana » I-UNWTO: Ukhenketho lwekhephu kunye neNtaba lujongene nomceli mngeni wokuziqhelanisa notshintsho
Iindaba zeNdibano zeAndorra • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Icandelo lokuhlangana • Iindaba zeShishini lokuhlangana • Abantu benza iindaba • Iindaba Zohambo Lwezemidlalo • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
I-UNWTO: Ukhenketho lwekhephu kunye neNtaba lujongene nomceli mngeni wokuziqhelanisa notshintsho
Matshi 27, 2018
INkomfa yeHlabathi ye-10 yoKhenketho lweSiqithi neNtaba (Andorra, 21-23 Matshi 2018) yaqaqambisa isidingo sokuhlengahlengisa indawo yokuhlala yezokhenketho kulindelo lwabathengi banamhlanje nokunyusa umgangatho wamava omhambi, ngelixa uchonga ulawulo lolwazi kunye nenkcubeko yokubuka iindwendwe njengezitshixo ukuya empumelelweni.
Le nkongolo iququzelelwe ngokudibeneyo ziiKomkhulu ezisixhenxe zeNqununu, uRhulumente waseAndorra kunye noMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO), iqonga leengxoxo elisisigxina lengxoxo malunga nophuhliso nokuzinza kokhenketho kwiindawo ezisezintabeni.
Ngaphezulu kwama-400 abathathi-nxaxheba abazimase uhlelo lweCongress lweshumi, kubandakanya nezithethi ezingamashumi amathathu ezivela kumazwe angaphezu kwe-16 kunye neengcali ezivela eSpain, eUnited States, eFinland, eFrance, eGrisi, eJapan, e-United Kingdom naseSwitzerland, phakathi kwezinye ezininzi.
Ekuvalweni kweCongress, uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili ugxininise ukubaluleka kweendawo ekuya kuzo iintaba ukuba zinganiki iimpendulo kwiimfuno eziguqukayo zabahambi, kodwa zikwenze nokugubungela iindawo ezisukela “kwimfuno yokwakha iziseko zophuhliso kunye neendawo zokuhlala ezizinzileyo, ezisemgangathweni. uqeqesho lobungcali, kunye nokulwa amaxesha onyaka nokwandisa izixhobo ”.
Ukuqukunjelwa kwengxoxo kwisithuba seentsuku ezintathu, iingcali ziveze imiba ekufuneka iphawule umgaqo wendlela oza kulilandela eli candelo lokhenketho lwamazwe aphesheya:
• Icandelo lezokhenketho liphume kwintlekele lafikelela kwinani elirekhodiweyo labakhenkethi kunye nendawo yokuhlala yabakhenkethi kwaye lithatha amanyathelo afanelekileyo okujongana neenkcukacha zabathengi eziya zifunwa ngakumbi kwaye zinamava.
• Ukwenza izinto ngekhompyutha nokwenziwa kwehlabathi kudale abakhenkethi abanemikhwa nolindelo olwahluke kakhulu kolo lweendwendwe zemveli, yiyo loo nto ezifuna iimveliso zitshintshwe kulindelo oluceliweyo kwicala leemfuno.
• Imiba ethile kwicala lonikezelo kufuneka iqhubekeke ukuphuculwa, kugcinwa engqondweni ukuba umgangatho wamava otyeleleyo kufuneka ibe sesona siphambili sale nguqu.
• Ukukwazi ukubonelela ngeehotele, iithambeka zokuskiya kunye neendawo zokhenketho ezanelisa abakhenkethi yenye yezinto eziqinisekisa impumelelo yendawo ekuyiwa kuyo entabeni. Kodwa kukho ezinye izinto ezichaphazelekayo, ezinje ngolawulo lolwazi, umgangatho weenkonzo kunye nenkcubeko yokubuk 'iindwendwe.
• Uqeqesho lweyunivesithi kunye namava ayasebenza kwimisebenzi yokhenketho, kwaye kule meko, uphononongo kunye nophando kwizifundo zeentaba zincedile ekuphuhliseni imeko ezinzileyo.
• Amaqonga amatsha edijithali kufuneka anikezele ngokhuseleko kunye nokuthembela kubo bobabini abanini kunye neendwendwe. Kwindawo yemimiselo yendawo yokuhlala, i-Andorra yazisa umthetho wayo omtsha yaza yaqaqambisa iinjongo zayo ezintlanu: ukuphendula indlela yokuziphatha kwabathengi, ukuphucula ubulungisa phakathi kwamaqela endawo yokuhlala, ukunciphisa ukusebenza ngokungekho mthethweni nokuququzelela ukulawulwa kwendawo yokuhlala engekho mthethweni, kunye nokuphucula umgangatho kunye nokhuseleko lweendwendwe. . Ukongeza, u-Andorra wazise igama kwi-Intanethi okokuqala njengomgaqo omtsha wokuhlelwa kwendawo yokuhlala.